चिनियाँ नयाँ वर्षको परिचय – किन्दर राई | WWW.HATTERI.COM
You are here : WWW.HATTERI.COM » Article » चिनियाँ नयाँ वर्षको परिचय – किन्दर राई
चिनियाँ नयाँ वर्षको परिचय – किन्दर राई
प्रकाशित मिति Tuesday, February 5, 2019
चिनिया समुदायमा सबैभन्दा ठूलो र धुमधामसाथ मनाईने चाड चिनिया नयाँ वर्ष अर्थात “चाइनिज न्यु इयर” हो । चिनिया पात्रोको पहिलो चन्द्रमासको पहिलो दिनबाट शुरु हुने यो नयाँ वर्षको दिन फरकफरक वर्षहरुमा प्रायः जनवरी र फेब्रुअरीको फरकफरक दिनहरुमा पर्दछ । २०१९ मा फेब्रुअरीको ५ तारीख नयाँ वर्ष परेको छ ।
चाइनिज नयाँ वर्षलाई चाइनिज(मेण्डरिन)मा “नोङ् ली शिन् निअन् (農 曆 新年) भनिन्छ भने हङ्कङ्का चाइनिजहरुले क्याण्टोनिजमा “नुङ्लिक् सन् निन् (農 曆 曆 新 年)” भन्दछन् । यसलाई लुनार न्यु यीयर (चन्द्रमा सम्बन्धी नयाँ वर्ष (Lunar New Year) र स्प्रिङ्ग फेस्टीभल (Spring Festival) पनि भनिन्छ । यो जम्मा १५ दिनसम्म रहन्छ र पहिलो तीन दिनलाई खास चाइनिज नयाँ वर्षको चाडको रुपमा मानिन्छ ।
पन्ध्रौं दिनलाई “युअन् शियाओ चिए(元 宵 節)” र क्याण्टोनिजमा “युन् सिउ चित्(元宵 節) भनिन्छ जसको शाब्दिक अर्थ “अँध्यारोको शुरुवात दिन” हुन्छ । यसलाई लालटिन दिवस पनि (Lantern Festival)भनिन्छ । यस दिनबाट औँसीको रातको शुरुवात हुन्छ । विद्यालयका विद्यार्थीहरुले यस दिन विभिन्न किसिमका लालटिनहरु बनाएर लाने गर्दछन । विद्यालयहरुमा लालटिन डिजाइनको प्रतियोगिता नै गराइन्छ । यस अन्तिम दिनको लालटिन दिवसलाई भने छुट्टै चाडको रुपमा पनि सूचिकरण गरिएको छ “स्प्रिङ्ग लालटिन फेस्टिभल (Spring Lantern Festival) भनेर ।
चाइनिज वर्ष र सामान्य वर्षमा फरकः
सामान्य पात्रो अर्थात अग्रेजी पात्रो अनुसारको वर्षमा ३६५ दिन हुन्छ । यसलाई बाह्र महिनामा विभाजन गरिएको छ, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च …..भनेर । एक महिनामा २८ देखि ३१ दिनसम्म हुन्छ । यो पृथ्वीले सूर्यलाई फन्को मार्ने अवधिको आधारमा तय गरिएको हुन्छ । यसकारण यसलाई सूर्य सम्बन्धी पात्रो (Solar Calendar) पनि भनिन्छ । पृथ्वीले सूर्यलाई पुरा एक फन्को मार्ने अर्थात आफ्नो कक्ष (Orbit) मा घुमेर एक फन्को मारेको अवधी नै एक वर्षको अवधी हो । पृथ्वीले सुर्यलाई एक फन्को मारेको एक वर्षको अवधीमा पृथ्वी आफ्नै अक्ष(axis)मा भने ३६५ पटक घुम्ने भएकोले नै यसमा ३६५ दिन भएको हो । यस अवधिमा पृथ्वीमा हुने सम्पूर्ण ऋतुहरुको एक चक्र पूरा हुने भएकोले यसलाई सर्वमान्य रुपमा एकवर्ष मानिन्छ र सामान्यतयाः यसै अनुसारको पात्रो संसारभरि प्रचलनमा आएको छ । यसरी पृथ्वीले सुर्यलाई फन्को मारेको आधारमा तय भएको वर्षलाई सुर्यवर्ष र महिनालाई सुर्यमास भनिन्छ ।
यता चाइनिज वर्षचाहिँ चन्द्रमाले पृथ्वीलाई फन्को मार्दाको अवधिको आधारमा तय भएको हो । चिनिया परम्परामा वास्तवमा चन्द्रमाको पर्यावाची शब्द नै महिना हुन्छ । त्यसैले चाइनिजहरुको महिना र चन्द्रमा जनाउने शब्द एउटै हुन्छ युत् वा युए (月) । धेरैजसो प्रशंगमा चन्द्रमा भन्नु र महिना भन्नु एउटै कुरा हो । त्यसैले पहिलो चाइनिज महिनालाई पहिलो चन्द्रमा (First moon)पनि भनिन्छ । यसरी चन्द्रमाले पृथ्वीलाई फन्को मारेको आधारमा बनेको वर्षलाई चन्द्रवर्ष र महिनालाई चन्द्रमास भनिन्छ ।
सामान्य महिनामा २८ देखि ३१ दिन हुन्छ भने यता चन्द्रमाको गतिको आधारमा बनेको महिनामा साढे उनन्तीस (२९.५) दिन मात्र हुन्छ । यसरी चन्द्रमाको गति अनुसारको महिना(चन्द्रमास)ले एक वर्षमा ३६५ दिन नपुग्ने भएकोले केही वर्षको अन्तरालमा एउटा छुट्टै महिना(चन्द्रमास) थप्नु पर्ने हुन्छ । किनकि माथि नै भनिएको छ कि पृथ्वीले सुर्यलाई फन्को मार्ने अवधिको आधारमा बनेको वर्षमा मात्र सम्पूर्ण ऋतुहरुको पुर्ण चक्र पूरा हुने गर्दछ र यसले मात्र हामीलाई पुर्ण वर्षको अवधिको अनुभूति दिन सक्दछ र व्यवहारिक पनि हुन्छ । जसले गर्दा त्यस वर्ष १३ चन्द्रमासको एक वर्षहुने गर्दछ । त्यहीकारण हो कि चाइनिज नयाँ वर्षको पहिलो दिन सामान्य पात्रोको कुनै एउटै दिनमा नपरी वर्ष पिच्छे फरकफरक दिनमा पर्दछ ।
सामान्य अवस्थामा फेब्रुअरी महिना जहिल्यै पनि २८ दिनको हुने गर्दछ । यही सामान्य पात्रो अनुसार पनि प्रत्येक चार वर्षमा फेब्रुअरी महिना २९ दिनको हुने गर्दछ । यस्तो फेब्रुअरी महिना २९ दिनको भएको वर्षलाई हामी अधिवर्ष अर्थात लिप्‌यियर (Leap year) भन्दछौं ।
यो चाइनिजहरुको लागि प्रमुख चाड हो । कोरिया, मंगोलिया, नेपाल, भुटान, भियतनाम र जापान लगायत चीनको भौगोलिक रुपमा नजिक रहेका देशहरुमा पनि यसको राम्रो प्रभाव परेको छ । त्यसैगरी सिंगापुर, इण्डोनेसिया, मलेसिया, फिलिपिन्स, थाइल्याण्ड जस्ता चाइनिजहरुको बाक्लो वस्ती भएका देशहरुमा पनि चाइनिज नयाँवर्ष धुमधामकासाथ मनाइन्छ । क्यानाडा लगायतका देशहरुमा विदेसिएका चाइनिजहरुले पनि यो चाड धुमधामकासाथ मनाउछन् ।
प्रायः आफन्तजनकोमा कोसेलीपात बोकेर भेटघाट गर्न जाने, आफूभन्दा सानोलाई रातो खाममा पैसा दिने गरिन्छ जसलाई “लाइ सी 利是(क्याण्टोनिजमा)” भन्ने गरिन्छ । कामको मालिकले कामदारदेखि लिएर आफूभन्दा साना जोसुकैलाई पनि यस्तो “लाई सी” दिइने गरिन्छ भने आफूभन्दा ठूला र पूर्वजहरुलाई मान्नु यस चाडको प्रमुख विषेशता हो । लाइसिको रुपमा दिइएको रकम चाहे धेरै हो वा थोरै होस यसलाई शुभ र पवित्र पैसा मानिन्छ । हरेक व्यक्तिहरु एकआपसमा “कुङ् हेइ फात् छोइ !, कुङ् हेइ फात् छोइ 恭喜發財 !” भन्दै आपसमा नयाँ वर्षको शुभकामना गर्दै हिडेका हुन्छन । (कुङ्ग हेइ 恭喜 =‍ बधाई; फात् छोइ 發 財 = शुभलाभको शुरुवात) अर्थात तपाईंको लागि फलिफापको शुरुवात होस् भन्ने अगिम बधाई बाँडिरहेका हुन्छन् । धनी र पहुचवालाले ठूला ठूला फुल्न लागेका आरुका रुखहरु र अन्य फलफूलहरुको बोटहरुले घर सजाउँछन् भने अन्य सर्वसाधारणका घरहरु पनि सानातिना फलफूल र फूलका गमलाहरुले सजिसजाउ गरिन्छ ।
यस पर्वमा नै चाइनिजहरुको पहिचानसहितको सांस्कृतिक नाँच ड्रागननाँच र सिंह नाँच नाँच्दछन । राती पटका पड्काउने र अतासवाजी (फायर वोर्क) गर्ने गर्दछन् ।
चाइनिज वर्षको हरेक १२ वर्षलाई विभिन्न जनावरको वर्ष भनेर नामाकारण गरिएको छ जुन नेपालका गुरुङ्, सेर्पा (र अन्य ?) जातिहरुले मान्ने गरेको जनावारसँग ठ्याक्क मिल्न आउँदछ । यस २०१९ साललाई चाइनिजहरुले सुँगुरको वर्ष भनेका छन् । गत साल कुकुरको वर्ष थियो भने अर्को वर्ष मुसा वर्ष हुने छ । । यी बार्‍ह जनावरहरुमा मुसा (Rat),
गोरु (Ox), बाघ (Tiger), खरायो (Rabbit), ड्रागन (Dragon), सर्प (Snake), घोडा (Horse), भेडा (Sheep), बाँदर (Monkey), कुखुराको भाले(Rooster),कुकुर (Dog) र सुंगुर(Pig) पर्दछन ।
लेखकः किन्दर राई
चाइनिज नयाँ वर्षको फायर वर्क्स रद्द!
गत शनिबार भएको भयावह बस दुर्घटनामा १९ जनाको निधन भएपछि हङकङ सरकारले चाइनिज नयाँ वर्षको…
नयाँ वर्षको बिहानै पुलिसले २ गोली हान्यो...
आज बिहान एक पुलिस जवानले एउटा कारमाथि २ गोली प्रहार गरे, फायर खोल्ने पुलिसका अनुसार…
पूरानो मान्छेका नयाँ गीतहरू - निरज राई
हेम कुमार लावती,बर्तमान परिचय समिक्षक समाज होङकोङको सन्योजक, अनि समिक्षक समाजका साथीहरूको प्रीय "हेदा"…
« LRT दुर्घटना हुँदा ३० घाइते
सार्वजनिक बि बि क्यु स्थलमा कार्यक्रम गर्ने नेपालीलाई चेतावनी ! »